पहिलो सन्तानको प्रतिक्षामा गरिमा, शेयर गरिन् बेबी बम्प ! – ramechhapkhabar.com
कतिपय अभिनेत्री रिल जीवनमा देखिने र रियल जीवनमा सामान्य हुन्छन् । रिलमा कथाले मागेपछि दृश्य दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क रहन्छ । तर ठिक उल्टो ।
रिल जीवनमा शालिन देखिने अभिनेत्री गरिमा पन्त भने रियल जीवनमा यस्ती र विन्दाम मुडमा युरोप भ्रमणमा तस्बिर शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् ।गरिमा कतै टु पिस त कतिपय ठाउँमा यस्ती अन्दाजमा देखिने गरेका तस्बिरले निकै चर्चा पाए ।
पछिल्लो पटक चलचित्र झोलाबाट अत्याधिक चर्चामा आएकी गरिमा अब सिनेमा क्षेत्रमा फर्कन्छीन वा फर्किनन् ? त्यो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।नेपाली फिल्मकी सुन्दर र भलाद्मी नायिकाको रुपमा चिनिने गरिमा पन्त बेल्जियम बस्न थालेको केहि बर्ष भैसकेको छ ।
झोला बाहेकका अन्य फिल्महरुले करिअर चम्काउनुको साट्टो झन फुर्सद बनाउन थालेपछि उनले बेल्जियमका धनाड्य नेपाली यूवक हरि शर्मासँग विवाह गरिन् । एक्कासी बेल्जियममा गरिमाले हरि शर्मासँग विवाह गरेको खबर बाहिरिँदा उनका प्रशंसकहरु एकपटक त दंगै परेका थिए तर फिल्म करिअर ओरालो लाग्न थालेपछि सायद गरिमाले यसको विकल्प भेटिनन् ।
उनले फिल्ममा आफ्नो छवि कहिँले धमिलो बनाइनन् न त उनका कुनै खबरहरु नै बाहिर आए । पर्दामा सधै सारी चोलो वा कुर्था सुरवालमा देखिएकी गरिमाको शरीरबाट अहिले यी सबै पहिरन हराएका छन् ।